Amarok မမျှော်လင့်ဘဲထွက်ပေါက်? ယာယီဖြေရှင်းချက်။ Linux မှ
အခုငါမသုံးတော့ဘူး PulseAudioဒါကြောင့်သူ့ကိုငါအပြစ်တင်လို့မရဘူး။ မှတ်တမ်းတွေကိုကြည့်လိုက်တော့ငါသဘောပေါက်သွားတယ် Gstreamer ပါ ငါပြaနာရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်တယ်, ငါကအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်ကတည်းက ဖိုနွန် ပြီးတော့အင်တာနက်ကိုရှာဖွေပြီးနောက်ကျွန်ုပ်မေးခွန်းကိုအတည်ပြုလိုက်သည်။
သင်အသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင် ArchLinux y Amarok မမျှော်လင့်ဘဲပိတ်, ပြောင်းလဲနေတဲ့အားဖြင့်က fix ကြိုးစားပါ phonon-gstreamer အားဖြင့် phonon-vlc.
ငါတို့ရှုံးနိုင်တယ် အရည်အသွေးအချို့, ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးကစားသမားမမျှော်လင့်ဘဲပိတ်ထားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ Phonon Motor ကိုပြောင်းဖို့ငါတို့သွားမယ် System Preferences » Multimedia » Audio နှင့် Video Preferences »အင်ဂျင်:
ငါတို့လိုချင်သောအရာကိုရွေးချယ်ပြီးနောက် (၎င်းသည်အထက်သို့သွားသင့်သည်) ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည် session ကိုပိတ်လိုက်ပြီးဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Amarok မမျှော်လင့်ဘဲထွက်ပေါက်? ယာယီဖြေရှင်းချက်
ကောင်းပြီ၊ သိတာကောင်းတယ်၊ ငါဒါကြောင့်ဒီကိန်းဂဏန်းကြောင့်ကလီမန်တိုင်းကိုပြောင်းခဲ့တယ်။
Amarok မမျှော်လင့်ဘဲပိတ်ထား? ယာယီဖြေရှင်းချက် "
ငါ "အဓိပ္ပါယ်ဖြေရှင်းချက်" ဟုပြောချင်သော behemoth ကိုဖယ်ထုတ်ပြီး Clementine ကိုထည့်ပါ။
Amarok က V2 ကိုခုန်ဆင်းခဲ့ပြီးကတည်းကဘယ်တော့မှမတူခဲ့ဘူး၊ အခုတော့သူက OS X iTunes လိုမျိုး pachyderm ဖြစ်နေပြီ
အချိန်ကာလ၏အကောင်းဆုံး Amarok၊ ၁.၄၊ ကလီမန်တိုင်းသည်မည်မျှတန်ဖိုးရှိသည်ကိုသူတို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။
ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် Arch Clementine မှာမကြာသေးခင်ကမှ update လုပ်ထားတဲ့စာကြည့်တိုက်တစ်ခုကိုငါမတင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါကလိုက်ဖက်မှာမဟုတ်ဘူး။ Amarok load လုပ်ပါတယ်
ထို့အပြင်ငါ Amarok element များ၏ layout ကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်။ သီချင်းများ၏သီချင်းစာသားများနှင့်အခြားအချက်အလက်များကိုအလွယ်တကူမြင်နိုင်သည်။ ဤအရာအားလုံးကိုယခုအချိန်တွင်ကလီမန်တိုင်းမလုပ်နိုင်ပါ။
ကောင်းပြီ, Amarok မူးယစ်ဆေးဝါးများအတွက်မိခင်တစ် ဦး ကိုပေးပို့ခြင်းထက်ငါ့အဘို့အရုပ်ဆိုးသည်, သောအရုပ်ဆိုး xD
၎င်းသည် Clementine more ထက်ပိုမိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်
ငါလုပ်ဖို့နှစ်ခါဖွင့်ရတယ်၊ ပထမတစ်ခုကငါမသေခင်မှာအပြည့်အဝမဖွင့်ဘူး ...
ကျွန်ုပ်၏ဂီတစာကြည့်တိုက်ကိုကျွန်ုပ်အားပေးထားသောကြံ့ခိုင်မှုကြောင့်စီမံခန့်ခွဲရန်ကျွန်ုပ်သည် VLC ကိုအသုံးပြုသည်။ ဗီဒီယိုဖွင့်စက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်ထားသည့်အရာအများစုသည် multimedia player ဖြစ်သော်လည်း VLC သည်ကျွန်ုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်မပျက်ခဲ့ပါ။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ဂီတနှင့်အွန်လိုင်းရေဒီယိုများကိုသာအသုံးပြုလိုပါကဂီတကိုနားထောင်သည့်အခါ Audacious သည်ကျွန်ုပ်၏အရေပြားကိုအမြဲသိမ်းဆည်းပေးခဲ့သည်။
Amarok နှင့် iTunes ၏ mastodons များအကြားတွင် iTunes ကိုရွေးချယ်သည်။ နောက်ဆုံးအချက်။
တေးဂီတဖွင့်စက် Daemond ကိုကျွန်တော်ရောက်ရောက်ချင်းဒီကစားသမားကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်အသုံးပြုခဲ့သောဗားရှင်း မှစ၍ (ယခုတွင်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အသံဖမ်းခြင်းများကိုသာအသုံးပြုသည်) ကတည်းကများစွာထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။
ဟုတ်တယ် Amarok iTunes Linux ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူမရှိတဲ့အတွက် VLC နဲ့ Audacious QT ကိုသုံးပြီးပါပြီ။
Mhhh လည်းမဆိုးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် shoutcast plugin လည်းရှိတယ်။ ငါ့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။
Fedora မှာလည်းကျွန်မလည်းအတူတူပဲ၊ တခြားလူတိုင်းလုပ်တဲ့အတိုင်းငါလုပ်ခဲ့တယ်။ ငါ c ** o အတွက်ယူရန် amarok ကိုလွှတ်လိုက်ပြီးကျွန်ုပ်သည်ကြီးကျယ်သော Clementine တွင်အခြေချခဲ့သည်။
သင်ပြောသည့်အတိုင်းအမှားသည် gstreamer၊ အထူးသဖြင့်နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းဖြစ်သည်။ ငါ 4.6.3 အဆင့်လျှော့ချခဲ့ပြီးအဲဒီအချိန်ကစပြီးဘာပြanyနာမှမရှိခဲ့ဘူး
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်ယခုအထိမမျှော်လင့်ဘဲပိတ်ထားခြင်းမရှိသေးပါ။ ၎င်းကို desktop ပေါ်တွင် sid ၌နှစ်နှစ်ခန့်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ငါ့မှာ gnome နဲ့ gnome3ရှိတုန်းကငါ rhythmbox ကိုသုံးတယ်။ ဒါကအတော်လေးကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့်ဝံပုလွေကိုငါမမှတ်မိဘူး။ Debian နဲ့ ၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေကတည်းကငါကသူနဲ့တွေ့တာနဲ့ချက်ချင်းပဲသုံးခဲ့တယ်။ ပိတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးမည်သည့်တိုင်ကြားချက်မဆို၊
KDE ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်၊ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေဆုံးရှုံးသွားရင်တောင် ALSA + Phonon VLC ကိုပဲသုံးတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။
သတိထားပါ၊ Gstreamer နှင့် Pulse Audio မကောင်းသောကြောင့်မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းတို့သည်အခြား ဦး တည်ရာတစ်ခုတည်းသို့ ဦး တည်သွားခြင်းသာဖြစ်သည်။
Gstreamer သည် Phonon VLC ကဲ့သို့ playback အရည်အသွေးနှင့်စစ်ထုတ်မှုများတူညီပြီး၎င်းသည် equalizer ကဲ့သို့သောသာမန်အရာများကိုလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။ Pulse Audio သည် configure လုပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မည်။ , ဤအရာအလုံးစုံကို desktops QT သို့မဟုတ် GTK ပေါ်မှာရှင်းလင်းစွာ, ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ရက်စွဲရောက်ရှိမထားပါဘူး။
Privacy - သင်၏ privacy ကို Firefox ဖြင့်ကာကွယ်ရန် Plugins များ